Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Wararka kala duwan » Tani ma dariiqa lagu joojinayo aafooyinka ka jira Dunida?
Caafimaadka Warka • Warshadaha Warshadaha • News • Dalxiiska • Hadalka Dalxiiska • Daalacanayo Hadda • Wararka kala duwan
Qorshe cusub oo loo yaqaan "Roadmap to End a Pandemics" ayaa lala wadaagayaa xubnaha ASEAN ee baarlamaanka wuxuuna ugu yeeraa "Dabeecadda Dabiiciga ah tallaalka kaliya ee muddada dheer jiraya," isagoo leh habka loo tallaalo Dunida waa "Hal Caafimaad."
Qaar ka mid ah baarlamaannada iyo dawladaha xubnaha ka ah ASEAN waxay ku tiirsan yihiin habka One Health si looga hortago aafooyinka mustaqbalka.
Ka-hortagga ayaa ku kacaya boqolkiiba 0.2 boqolkiiba soo-kabashada iyo u-diyaargarowga safka ah ee sanadlaha ah waana in lagu dhex daraa barnaamij kasta oo "Dib-u-dhis wanaagsan".
"Roadmap" oo ay soo bandhigeen 80+ urur ayaa hagta dawladaha, shirkadaha, jaaliyadaha, iyo shaqsiyaadka sidii kor loogu qaadi lahaa xalalka kahortaga aafada.
Isbahaysi caalami ah oo ku takhasusay daryeelka, beeraha, caafimaadka, amniga, dhaqaalaha, iyo isgaarsiinta, EndPandemics, ayaa maanta sii daayay khariidad wadashaqeyn si looga hortago aafooyinka mustaqbalka in la qabto kulan gaar ah oo ay yeeshaan xildhibaannada Ururka Isbahaysiga Koonfur-Bari Aasiya (ASEAN) iyo waddamada goobjoogayaasha ah.
Iyada oo ay sii kordheyso noocyada cusub ee noocyada cusub ee fayraska SARS-CoV-2, Golaha ASEAN ee Golaha-Barlamaanka (AIPA) waxaa ka go'an dib-u-eegista iyo dhiirrigelinta istiraatiijiyad wax ku ool ah oo looga hortagayo cudurrada faafa waxayna isku raaceen in laga fiirsado Habka Caafimaadka Hal. Barnaamij gaar ah oo "Webinar fulin ah oo ku saabsan kahortaga masiibooyinka" ayaa waxaa soo qabanqaabiyey AIPA oo ay weheliso lamaanaheeda MOU, Freeland iyo isbahaysiga EndPandemics
Mid ka mid ah Caafimaadka wuxuu isku daraa tallaabooyin isla mar ahaantaana wax ka qabta caafimaadka dadka, caafimaadka xoolaha (oo ay ku jiraan xayawaanka la dhaqdo iyo kuwa duurjoogta ah), iyo caafimaadka deegaanka si loo yareeyo halista cudurrada faafa ee ka imanaya meelaha ay ka yimaadaan. Saddex meelood labo meel dhammaan cudurada faafa ee cusub (oo ay kujiraan HIV, Ebola, SARS, MERS, iyo COVID-19) waxay asal ahaan kasoo jeedaan xayawaanka.
Sharci-dajiyayaal iyo saraakiil kale oo ka kala socda Brunei, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Philippines, iyo Vietnam, iyo sidoo kale Canada, baarlamaanka Yurub, New Zealand, iyo Republic of Korea, ayaa ahaa kuwii ugu horreeyay ee dib u eegis ku sameeya kana wada hadla “Roadmap to End Faafa: Si Wada Jir Ah Loo Dhiso, ”oo dejineysa nashqad cusub oo loogu talagalay xallinta kahortagga cudurrada faafa.
Roadmap-ku wuxuu siinayaa qaab furan wada shaqeynta dawladaha, ganacsiyada, bulshada, bulshada rayidka ah, iyo shakhsiyaadka ku teedsan 4-ta tiir ee aasaasiga ah ee ka hortaga aafada: (1) in la yareeyo baahida loo qabo xayawaanka duurjoogta ah, (2) in laga baxo ganacsiga ganacsiga ee duurjoogta, ( 3) ilaalinta iyo soo celinta deegaanka dabiiciga ah, iyo (4) beeraheena iyo nidaamyada cunnada inaan ka dhigno kuwo amni iyo caafimaad qaba.